Google Adwords, Adsense uye Google Mepu? | Martech Zone
Chishanu, June 8, 2007 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Pamwe ndirikunonoka kuuya kumafaro uye watoziva izvi, asi handina kuziva kuti Google Adwords yaishanda neGoogle Mepu. Ndine saiti yandave kuyedza nayo. Kumberi, ndine dhatabhesi inogadzirisa yako IP kero (kero yako yenetiweki) kune latitude uye kureba. Ini ndobva ndashandisa iyo latitude uye longitude kuratidza pakati mepu.
Ini handina kubata chirongwa ichi mumwedzi yakati wandei uye ndangotanga kuchishandira zvakare uye izvi ndizvo zvandakawana:
HAPANA, Ndinodzokorora HAPANA, inotaura yenzvimbo yenzvimbo mukushandisa sezvo iri yepasi rose saka Google inofanira kunge iri kushambadzira kumusoro kushambadziro kubva panzvimbo yemepu.
Akanaka kutsvedza! Ivo vanofanirwa kunge vari kushandisa iyo centering latitude uye longitude (kana mataera emepu mifananidzo) kuona Adsense Kushambadzira. Ini ndakanyatso 100% ndakafadzwa (uye ini ndoda kuwana ino saiti kumusoro chaizvo! Imi vakomana veGoogle (uye magals) mune mamwe smart dudes (uye madudettes).
Zvakaipa zvakadii nzvimbo dzinowedzeredza nhamba yavo yevashanyi?